Ghaya Grand Hotel 5 * - kuba ehhotela elithokomele lesimanje esikhulu UAE. Le ndawo liyaziwa-level omuhle kakhulu inkonzo, indawo yokuhlala kokutamasa kanye nenamba enkulu ezihlinzekwa. It uyama lapha abantu abacebile ngempela abafuna uthole okuningi iholidi yabo. Nokho, kufanele ukhulume leli hhotela umniningwane elengeziwe.
Kafushane mayelana eziyinkimbinkimbi
Ghaya Grand Hotel 5 * - kuba ehhotela nge amagumbi yesimanje ukuthi ngiziqhayise ifenisha entsha, umbala TV neziteshi satellite ukukhanyisa LED, uhlelo emoyeni Ukupholisa nezinye Izinsiza. Lena mini-bar, futhi itiye izesekeli, futhi endaweni zihlalo, kanye nekamelo lokugezela elineshawa ... I eziyinkimbinkimbi kufaka hookah, i-lounge wokubawa abantu bayisekele, ibha ngasechibini, zokudlela ezimbili, futhi nje lena uhlu encane izikhungo, okuyinto ungakhululeka bese nijabula lodgers. Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe ngabo Kamuva sizoxoxa ngokuthi.
Kutholwe Ghaya Grand Hotel 5 * eduze ngobukhulu Sekutsenga ngokuthi Emirates. 25 amaminithi ehlukanisa izivakashi ehhotela kusuka esikhumulweni sezindiza zamazwe ngamazwe. Futhi vala kakhulu endaweni ocebile Jumeirah Beach Residence. Lesi sakhiwo sinamagumbi izakhiwo eziyisithupha futhi ingqikithi 765 amakamelo ehhotela amakilasi ahlukahlukene.
Indawo inikeza amafulethi
Ghaya Grand Hotel 5 * eyakhelwe ezonini lokho okubizwa ngomlobokazi Dubai International Media Production Zone. Le ndawo ehlonishwayo futhi yesimanje. Iseduze futhi igalofu ngisho ehlukile ezemidlalo ndawo. 18 amakhilomitha ehlukanisa izivakashi ebhishi, the Jumeirah Beach ke Residence. Futhi eseduze kukhona ezitimeleni.
Ngakho nezivakashi ezingaba khona linikeza izinhlobo eziningana amakamelo. Kukhona twin Deluxe (endaweni - 31 square metres), zonke zokuhlala 119. Inani elifanayo Deluxe esifanayo, imibhede 2 nje. Enye ezihlongozwayo amakamelo club 26 (Area 31 futhi sq. M). Futhi-ke has 67 amakamelo kwalesi sigaba, njengoba oPhethe. Basuke ngokuvamile kuchazwa ngokuthi Club Suite. Ihhotela lingabhukwa nezindawo zokuhlala kubantu abakhubazekile - onjalo 8 izingcezu. Futhi ekugcineni, igumbi eqolo: Senatorial futhi amanxusa - 2 no-4, ngokulandelana. Bona azigcini nje ngokuhluka imigomo, kodwa futhi ngobukhulu. Senator suite ine indawo 128 sq. m and amanxusa - 85 sq. m.
Ngo Ghaya Grand Hotel 5 * (Dubai), awukwazi kahle kuphela bachitha usuku lonke nobusuku, kodwa nesokuphumula ngokugcwele futhi ujabule. Ngokwesibonelo, abalandeli yezemidlalo bayokwazisa iyatholakala kwi-site ithenisi enkantolo kanye real ukuqina igumbi imishini umsebenzi. Futhi kuzivakashi bathanda uphumule umzimba nomphefumulo, bayojabulela sauna kanye spa. Kukhona igumbi massage, igumbi umusi, Jacuzzi. Futhi ngisho isikhungo Wellness - njengoba ehhotela.
By the way, mayelana yokuchitha isizungu babantwana izivakashi nabo ukuza ukuphumula, ekuphathweni nayo zinakekelwe. Ehhotela kukhona play endaweni yezingane ngisho mini-club. Izingane zijabulela umhlengikazi oQeqeshiwe, ngenkathi abadala abanothando yokuchitha isizungu zabo. Ngokwesibonelo, uhlelo ebusuku - ke abathintekayo Animators wendawo.
Grand Ghaya Ihhotela 5 * (Dubai) ahlinzeke insizakalo ezehlukile ngempela. Lapha obakhathalelayo okwenza isivakashi aneliseke kokuhlala kwawo. Kukhona zonke ezihlukahlukene services: kusukela ukulethwa iziphuzo kanye nokudla egumbini ziphethe yokuhlanza izicathulo. Car ukudluliselwa (edolobheni noma kusukela / kuya sezindiza), isevisi ithikithi, elondolo, zokuhlanza owomile, ayina, ngisho nezinto izivakashi ubusuku nemini futhi ukwamukela khona! Futhi akusiwona wonke uhlu. Ikhamera ukugcinwa noma imithwalo izito nomshini we-fax ne-iphrinta for amakhophi, isitolo isikhumbuzo, nezitolo ezinkulu nge imikhiqizo ehlukahlukene, isikhungo ibhizinisi kanye ikamelo umhlangano izingqungquthela noma amadili. Futhi-ke, ihhotela inikeza ekhethekile kukankosikazi suite VIP-namasevisi. By endleleni, kukhona imoto park - 414 izindawo mahhala izivakashi.
Ihhotela eziyinkimbinkimbi Ghaya Grand Hotel 5 *, isithombe okuyinto anikezwa esihlokweni, idume zokudlela yayo. Inani elikhulu lezivakashi, wake eyeka lapha, waphawula ukunakekelwa okukhethekile kulezi zikhungo. Ngokwesibonelo, yokudlela ngokuthi Red Diamond ilungele ukwamukela izivakashi nganoma isiphi isikhathi sosuku - lapha zikhishwa kwasekuseni okumnandi futhi fresh, kwasemini, futhi dinner. Kukhona yesibili - a la Carte "Fusion". Le ndawo yokudlela ukhonza cuisine multi. Yena usebenza ngesikhathi sedina. Lesi sikhungo eyenziwa ezihlukahlukene indaba ephathwayo nobusuku obungamashumi amane. Izivakashi nethuba ukuzama ezihlukahlukene Chinese, cuisine Lebanese, isiNtaliyane, Indian kanye Oriental kanye amakhono kusukela hlupha.
Kodwa akugcini lapho. Kukhona lounge ikhofi kanye ithala ongaphandle kanye nehholo ivulekile. Kukhona ungakwazi nambitha pizza fresh, ehla zaseMpumalanga kanye kaShisha. Okuningi esizeni Ghaya Grand Hotel 5 * izibuyekezo waphefumulelwa ukuba uvakashele kule ndawo, kukhona ayimi yokwamukela izivakashi bar ikhofi omkhulu asanda kutsho, ayo, okuyinto enze ngesikhathi isivakashi, amakhekhe namakhekhe. Kukhona lounge club. Kukhona konke: kwasekuseni, kwasemini, kokudla kwakusihlwa, ukudla okulula, sandwich, canapés, izithelo neziphuzo. Ibha ZOKUBHUKUDA izobhekela asanda isibambo juice chilled noma izithelo cocktail, ngemva kokulunywa pizza Ungadla noma okunye ukudla ukukhanya.
Ngakho, njengoba sekushiwo, ihhotela linikeza ongakhetha yokubhuka eziningana ezingase zibe endaweni efana ehhotela Ghaya Grand Hotel 5 * (Dubai). Ngokwesibonelo, cabangela izinkondlo, ikamelo Deluxe. Ukubhukha abantu abangu-2 (noma ngaphandle ingane - mehluko) kanye emavikini amabili izobiza ubuncane ruble 107 000 (ukudla zikhokhelwa iyodwa). Uma uvula, yithi, ibhulakufesi, intengo kuzokhulisa ukuba 149 000 deda.
Imibandela zinhle:. Igumbi yesimanje nge ezinkulu Embhedeni owenezelwe 2-double enombono ebabazekayo, a minibar, air conditioning, ebanzi-42 intshi-TV, itiye izindawo, yokugezela (elineshawa), hairdryer, zokugeza kanye izimonyo nokunye D. I zokuhlala ezikahle nezingakwazi yesimanje - ne ukhululekile ifenisha entsha futhi isimo esinokuthula sakuleli. Ngaphezu kwakho konke lokhu okungenhla kukhona nice izinto kancane efana bidet, bathrobes, dryer, izingubo zokugqoka, ikhabethe futhi iphephile.
Kancane izindleko ezahlukene kanye suite esiphezulu - abantu ababili amasonto ama-2 ama-ruble angu-132 000. Kodwa lapho sidla ukudla kwasekuseni kufakwe isamba - 177 000 deda. Yiziphi izinsiza? Iziteshi embhedeni-2, mini-bar, ngocingo, satellite kanye cable ivulekile, indawo zihlalo, dryer, umshini wokomisa izinwele, lokugezela elineshawa, yangasese extra, bidet, unikezelwe ukufinyelela oPhethe Lounge, ukwahlukanisa, okhaphethi, Ukushisa, ngokuvamile, konke okungahlala kudingeke.
Ihhotela Ghaya Grand Hotel 5 * - ehhotela ekilasini phezulu, ezingeni ekhethekile. Ngakho ngingathanda ukukhuluma mayelana Suites ezibizayo futhi iyamangalisa kakhulu. Ambassador Suite, isibonelo. Kungaba afake abantu ababili kanye nengane. Izindleko yokubhuka amasonto amabili kwaba ruble ayizigidi ezingu 1.26. Kodwa kaningi lolu hlobo amafulethi banikwa izaphulelo, kungaba zigcinelwe ruble ayizigidi 430-450. Yini inikezwa ngalesi intengo? Lokhu suite ivulekile 85 square metres. m, engasetshenziswa kalula uma kuqhathaniswa ne flat ocebile. It has konke: lokulala, igumbi ophilayo, endaweni yokudlela, yokugezela elikhulu nge Jacuzzi, i-TV, i-phansi endaweni egandaywe ngemabula, soundproofing, isiqandisi, microwave, air conditioning, ekhishini yangasese - izimo ukufakwa kuhlu kungaba engapheli. Kodwa ukubeka ke kafushane, kukhona konke. Akumangazi ukuthi le amafulethi ekilasini ukusetha intengo ezinjalo.
Indlu ruble ezingaphezu kwengxenye yesigidi
Kodwa kukhona senatorial okunethezeka ehhotela Ghaya Grand Hotel 5 * (Dubai). Ubulwelwe Izibuyekezo kakhulu, futhi akumangazi. Izindleko igumbi ruble ezingaphezu kwengxenye yesigidi amasonto amabili! Lezi amafulethi futhi kukhona izaphulelo, ngakho uma kukhona isikhashana ezinjalo, sizokwazi bekisa it ezingaba yingxenye yesigidi. zikanokusho - 128 square metres. m, futhi konke esifisa isivakashi.
Inxanxathela Ghaya Grand Hotel 5 * (Dubai) wathola Izibuyekezo omuhle kakhulu. Ngoba kule ehhotela linikeza konke kungase kudingeke kuphela isivakashi eholidini. Ukudla Ezinhle ezihlukahlukene, ukhululekile, amakamelo ngokucebile ehlotshisiwe, izinhlobo ezihlukahlukene zokuzijabulisa kanye nezinsizakalo. Uma umuntu unethuba, nakanjani akufanele miss it, futhi ukuqhubeka eholidini kulezi zindawo. Kolwandle umuzwa omuhle ongenakulibaleka yibhange.
Kulo, abamenyiweyo unokuthile ukuqhathanisa, nithi ngisho amakamelo isabelomali ehhotela ukhululekile okuningi kakhulu kunalokho ezinye Suites ezibizayo kwenye indawo. Futhi, eziningi amazwi enhle ukusho izivakashi towards abasebenzi: amakamelo bahlanza nsuku zonke, futhi unembeza, futhi hhayi yokuzenzisa, abasebenzi nenhlonipho efanele, futhi ihlale ikulungele ukusiza izivakashi. Ngokuvamile, esiphethweni jikelele ukuthi iyindawo ehloniphekile kanye izimo ezinhle ngempela.
Ihhotela I Lumos Deluxe Resort Spa 5 * (Turkey, Alanya): ukubuyekezwa, izincazelo kanye nokubuyekeza
6 izindandatho zokuzibandakanya ezibizayo ezahla emlandweni
Izakhiwo yemilingo namakhambi okwelapha itshe Aventurine
Ubuchwepheshe Mobile. Yikuphi okungcono - aypad noma ithebhulethi Galaxy Tab?
Going eholidini edolobhaneni Zelenogorye (eCrimea). Incazelo, ezikhangayo, izithombe